Waxaa suuragal ah in Me inuu ka soo kabsado Faylal ay ka Freecom External Hard Drive?
Hab-Freecom External Hard Drive Data Recovery in 3 Talaabooyinka
Waa maxay sababta aad soo kaban karto, Lost / tirtiray / formatted / Waxyeello Xogta laga Freecom Drive
1 waxaa suuragal ah in Me inuu ka soo kabsado Faylal ay ka Freecom External Hard Drive?
My 250GB Freecom drive dibadda adag joojinayso shaqada lama filaan ah. Waxaan weli u arki kartaa maamulka disk laakiin anigu ma aan heli karo. Mar kasta oo aan isku dayaan in ay u furo, nidaamka ii sheego waa meel aan waxba ka jirin. Haatan, waxaan u tegayaa inaan ku saxno in xarunta adeega ah. Waxaan u ogaadaan dhammaan xogta aan ku yaal saaro ka dibna. Sidaas, tan iyo markii aan drive weli waxaa laga garan karaa computer, waa ay jiraan in xal loo helo igu inuu dib u helo xog aan? Mahad badan.
Tani waa su'aal wanaagsan iyo jawaabta gabi ahaanba waa ay haa tahay! Waa qalad nidaamka dhigaya Freecom drive dibadda adag la geli karin. Dhab ahaantii files ayaa weli aad drive, oo iyaga ayaad ugu soo ceshano karaa iyadoo la kaashanayo barnaamijka drive adag ah Freecom dibadda kabashada xogta.
Marka xogta ku saabsan Freecom drive dibadda adag uu lumo sababta oo ah tirtirka, formatting, musuq-maasuq, Baadi nidaamka ama xataa weerar virus, waxaad qaadan kartaa Wondershare Data Recovery , ama Wondershare Data Recovery for Mac sida isku day ah. Qalabkani waxa uu awood badan u saamaxaaya in aad ka bogsato files lumay kaliya ah hawlaha fudud oo khatar la'aan yar. Waxa ugu yaab leh barnaamijka waa in ay taageerto dib u soo kabashada ee noocyada oo dhan file, oo ay ku jiraan videos, sawirada, files audio, waraaqaha, iwm Plus, waa si buuxda u la jaan qaada Freecom drive adag oo USB flash drive aad.
Fadlan kala soo bixi version tijaabo ah Wondershare Data Recovery inuu ka soo kabsado xogta ka Freecom drive dibadda adag hadda.
2 Hab-Freecom External Hard Drive Data Recovery in 3 Talaabooyinka
Waxaan isticmaali doonaa Wondershare Data Recovery for Windows inuu ka soo kabsado files lumay ka Freecom External drive adag. Haddii aad qabto Mac ah, waxaad dib u soo ceshano kartaa Freecom xogta drive adag dibadda ee talaabooyin la mid ah la version Mac.
Tallaabada 1 Dooro habka soo kabashada inuu ka soo kabsado xogta ka Freecom drive dibadda adag ah
Waxaad heli doonaa 3 kabashada hababka uu ka soo xusho ka dib markii uu ku rakibidda iyo bilaabay barnaamijka on your computer.
Aynu qaadan "lumay Recovery File" sida isku day ugu horeysay inuu ka soo kabsado lumay, tirtiray, formatted ama kharribeen files ka Freecom drive dibadda adag.
Tallaabada 2 baarista Freecom drive dibadda adag
Markaas oo keliya u baahan tahay in aad dooratid in aad Freecom drive dibadda adag oo guji "bilow" button furmo si ay u bilaabaan baar files lumay it on.
Fiiro gaar ah: Fadlan hubi in aad drive Freecom waxaa laga garan karaa sida disk ah by your computer.
Tallaabada 3 Ladnaansho files ka Freecom drive dibadda adag
Ka dib markii iskaanka, heleen xog ku saabsan in aad Freecom drive dibadda adag doonaa oo dhan uu furmo suuqa lagu qoran. Waxaad ka arki kartaa magacyada file in lagu hubiyo sida badan oo files badiyay lagu soo kabsaday kartaa Freecom drive dibadda adag.
Ugu dambeyntii, waxaad karo files aad u baahan tahay oo ka dhacay on "Ladnaansho" si ay u hanato ka Freecom drive dibadda adag oo waxaan iyaga ku badbaadin on your computer.
3 Waa maxay sababta aad soo kaban karto, Lost / tirtiray / formatted / Waxyeello Xogta laga Freecom Drive
Sababtoo ah laga badiyay / tirtiray / formatted / data dhaawacan ayaa weli aad Freecom drive dibadda adag oo waxaa lagu calaamadeeyay kaliya xogta sida geli karin nidaamka. Waa in weligoodba la waayay oo kaliya marka lagu overwritten by xog cusub. Taas macnaheedu waxa weeye waad joojin kartaa adiga oo isticmaaleya isticmaale drive iyo raadiyo barnaamij sida Wondershare Data Recovery lagu soo saaro.
> Resource > Ladnaansho > Siduu u Freecom External Hard Drive Data Recovery